VOB792KK by Burma Democratic ... 482 views
RFAA MYNT 20.1.2011 by Burma Democratic ... 183 views
Alin Eain Magazine by Burma Democratic ... 172 views
Dog Bitten in Burma by Burma Democratic ... 153 views
Globalization, Borders & Immigration by Burma Democratic ... 451 views
1. 1995 ck atmufwdkbmvrSpwifI tywfpOfxkwfa0onf oice of BurmaV Published by Voice of Burma Information Group Issue No.789, NOVENBER 21, 2010 APTO 502, 7-18-1 , Takinogawa , Kita-Ku, Tokyo 114-0023, JAPAN Tel/Fax: 81 3-3949-3919, E-mail: sayarkway@yahoo.com , koko@gol.com kwd,yifvkHnDvmcHjzpfajrmufa&; a:pkajym=um;onfhrdef@cGef;tjynhftpkH ကျမကို ဒီလို တာဝန်ပေးတဲအတွက် အများကြီးပဲ ဂုဏယပါတယ်။့်ူရှိတယ်။ အလုပ်တခုက ညီလာခံတခုနဲ့ ပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူး။ ဒီညီနောက်ပြီးတော့ တာဝန်ဆိုတာအမြဲပဲကြီးမားတဲ့ကိစ္စတခုပါ။ တာဝန်ကို လာခံကနေပြီးတော့ အကောင်အထည်ဖော်လိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုထမ်းရတယ်။ ထမ်းရတယ်ဆိုကတည်းက လေးတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ် အဓိပ္ပါယ် ရှိရှိနဲ့ ဆက်ပြီးတော့ ကျမတို့နိုင်ငံအတွက် ရပ်တည်သွားနိုင်ဖို့တော့ရှိတာပေါ့။ တာဝန်သေးသေးဆိုရင်တော့ ခပ်ပေါ့ပေါ့ပဲ ထမ်းရမယ်။ ဆိုတာ အားလုံးရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်။ ဒီမျိုးဆက်တခုတင် မပြီးသွားဘူး။ဒီဟာကတော့ တာဝန်ကြီးကြီးဖြစ်လို့ ကျမ အင်မ န်မှ လေးလေးနက်နက် မျိုးဆက်တွေ မျိုးဆက်တွေ ဆက်ပြီးတော့လုပ်ရမယ်။စိတ်ထဲမှာထားလို့ တာဝန်ကျေပွန်အောင်ကြိုးစားပါ့မယ်။ ဒါပေမယ့် တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံး ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့လုပ်ရမယ်။ အခုဒီလိုကျမတာဝန်ကျေပွန်အောင်လုပ်တဲ့အချိန်မှာ ကျမကိုဝန်းရံပြီးတော့ ကျမတို့ ဒီလိုဝါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီးများကို ကန်တော့ပူဇော်ပွဲမှာဒီလိုကူညီပေးဖို့လိုပါတယ်။ ကျမတို့ လူကြီးတွေကလည်းအကြံဉာဏ် ပေးဖို့၊ ကိစ္စမျိုးနဲ့ဆုံစည်းပြီး လုပ်တာ အင်မတန်မှသင့်တော်တယ်လို့ ကျမဆုံးမစရာရှိတာဆုံးမဖို့၊ ကျမတို့ အထူးသဖြင့် ကျမတို့တိုင်းရင်းသား ထင် ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင် ကျမတို့ ၀ါရင့်နိုင်ငံရေးသမားတွေဟာ ကျမတို့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာကို ကျမတို့ကို ကြီးများ၊ ကျမတို့လူကြီးများက ကျမတို့ကိုလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့ တာပြဖို့၊ တချိန်လုံး တယောက်နဲ့တယောက် တဘက်နဲ့တဘက်စကားပြော ၀န်ပေးအပ်တဲ့သဘောပါ။ အဲဒီတော့ ကျမတို့ကလည်းအခုကတည်းဆွေးနွေးပြီးတော့ ဒီတာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်သွားရမှာပါ။ က ဘွတ်ကင်လုပ်ထားရမှာပေါ့ (ရယ်လျက်…)။ ကျမတို့ပြီး လို့ရှိရင် ကျမတယောက်တည်း ကျမသဘောနဲ့ ထမ်းဆောင်သွားလို့ မ လူလတ်ပိုင်း၊ လူလတ်ပိုင်းကနေ လူငယ်ပိုင်း အဆင့်ဆင့်လုပ်သွားဖြစ်ပါဘူး။ အခု ဒီမှာရောက်နေတာက မျိုးဆက်တွေကလည်းစုံတယ်။ ရမှာပါ။ ဘယ်တော့မှနိုင်ငံရေးဆိုတာ ပြီးတယ်လို့ မရှိပါဘူး။နိုင်ငံရေးလူကြီးတွေ..ကျမတို့ အခုလာကန်တော့နေတဲ့ ဘဘတို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေ၊ ဆိုတာ လူတိုင်းနဲ့ ဘယ်သူနဲ့မှလည်း ကင်းတယ်လို့မရှိဘူး။ ဘယ်တော့ကျမတို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေ၊ ကျမတို့ ထက်ငယ်တဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်တွေ၊ မှလည်း ပြီးဆုံးသွားတယ်လို့မရှိဘူး။ အဲဒီတော့ ကျမတို့ ဒုတိယ ပင်လုံ၈၈ ထက်ငယ်တဲ့ လူငယ်တွေ မျိုးဆက်တွေပေါ့နော် ဒီမျိုးဆက်တွေ လို့ပဲ ပြောပြောပေါ့နော်၊ ကျမ ၂၁ ရာစုနှစ် ပင်လုံလို့ ပြောချင်တာက ၂၁မျိုးဆက်တွေဟာ ဒီတာဝန်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ ထမ်းဆောင်သွားရ ရာစု အမြင်တွေနဲ့လည်း ကိုက် အောင် ၂၁ ရာစုနှစ်မှာ ကျမတို့ရမယ့်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျမတို့ အခုက အရေးကြီးတာက ကျမရဲ့ အခွင့်အရေးတွေ လုပ်ပုံလုပ်နည်း ပေါ့နော် … လမ်းကြောင်းတွေနဲ့ကိုက်အမြင်ကို ကျမပြောတာပေါ့နော်၊ ညီလာခံတခုထက် အရေးကြီးတာက အောင်ဆိုပြီးတော့ ကျမက သုံးလိုက်တာပါ။စိတ်ဓာတ်ပဲ။ အဲဒီတော့ ကျမတို့ဟာ ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ကို ဆက်ပြီးတော့ လူကြီးတွေပြောတဲ့ ဒုတိယပင်လုံဆိုတဲ့ စကားကိုဖယ်ရှားတဲ့သရှင်သန်နေအောင်လုပ်သွားဖို့ဟာ နောင်မျိုးဆက်တွေမှာလည်း တာဝန် pmrsufESm3okd h vkHðcHa&;aumifpDrSm attkdifDtufpf jrefrmEkdifiHtay: vlxkacgif;aqmif a:pkrS attdkifDtufpf a:atmifqef;pk-unf jrefrmhta&; wHcg; a0wem&Sifrsm;ukd rl0g ajymif;vJEkdifa&; a[majymyGJ ysuf&m a0emonfawGtwGuf &efukefwdkif; w&m;±Hk; ydwfaqG;aEG;awmhrnf a:atmifqef;pk-unf tar&duefjynfaxmif ysufa-umif; pGrf; tultnDawmif;cH csKyfwGif usrf;usdef awG hqkHtm;ay; pkapmifh-unhf tm;&Sifrsm; zefwD; pmrsufESm 16 pmrsufESm4pmrsufESm7pmrsufESm 10 pmrsufESm 19 pmrsufESm 13 NOVEMBER 3, 200 Voice of Burma 789 Page
2. aumif;jrwfaomzdwfac:csufESifh aumif;jrwfaomwkH@ jyefcsuf မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မြန်မာပြည်အနာဂတ်ငြိမ်းချမ်း VOB ရေး တိုးတက်ရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီရေး အတွက် နအဖစစ်အာဏာပိုင်များမှ မည်သူနှင့်မဆိုတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမည်ဟု ကမ်းလှမ်းလိုက်သည်။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးမှုဖြင့်မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းအ လဲကို ငြိမ်းချမ်းစွာပြောင်းလဲလိုသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် စစ်အာဏာရှင်များကို စိတ် tm စေတနာကောင်းဖြင့် ရှေ့ရှုးကာ တောင်းဆိုနေခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း စစ်အာဏာရှင်များ၏တုံ့ ပြန်ချက်များသည် မြန်မာနိုင်ငံအနာဂတ်ကောင်းစားရေးအတွက်ဖြစ်မလာခဲ့ပေ။ abmf မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွင် စစ်တပ်သည် အဓိကျသောအခန်းကဏ္ဍတွင်ပါဝင် သည်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အသိအမှတ်ပြုလက်ခံထားခြင်းကြောင့် ယခုကဲ့သို့ကမ်းလှမ်း နေခြင်းဖြစ်သည်မှာ သံသယဖြစ်ဖွယ်မရှိပေ။ ထို့အတူ လက်ရှိစစ်အာဏာရှင်များကလည်း နှစ် ပေါင်း ၂၀ ကျော်ကြာမြင့်နေသည့် နိုင်ငံရေးပြသနာများကို ဖြေရှင်းရာတွင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏အခန်းကဏ္ဍကို လျစ်လျူရှု၍မရဆိုသည့်အချက်ကို လက်မခံ၍မဖြစ်ပေ။ အပြန်အလှန်အသိအ မှတ်ပြုမှုများဖြင့် စေ့စပ်ဆွေးနွေးမှု များကို စတင်နိုင်ပေမည်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ စစ်ရေး စသည့်မည်သည့်အရေးတွင်မဆို လုပ်ငန်းစတင်လုပ်ကိုင်မည်ဆိုလျှင် ပါဝင်ပတ်သက်နေသူအားလုံး သုံးသပ်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများကို ပြုရစမြဲဖြစ်သည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းများအောင်မြင်မှုရရှိမည်၊မရရှိမည် ဆိုသည်မှာ နောက်တဆင့်ဖြစ်သည်။ ကနဦးအဆင့်အနေဖြင့်လုပ်ဆောင်ရမည်မှာ အရေးကိစ္စ များတွင် ပါဝင်ပတ်သက်နေ သူများတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပင်ဖြစ်သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံအကျိုးအတွက် ယခုအခါ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများ၊ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ၊ ပြည်သူများ၏ပူးပေါင်းပါဝင်လုပ်ဆောင်မှုများဖြင့် စစ်အာဏာရှင်များနှင့်ညှိနှိုင်းလက်တွဲလုပ်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တဖြည်းဖြည်းချင်းစတင်ကြိုးပမ်းနေပြီဖြစ်သည်။ ထိုသို့သောအခြေအနေအချိန်အခါမျိုးတွင် စစ်အာဏာရှင်များ သည် ကျယ်ပြန့်သောသဘောထားအမြင် တွေးခေါ်သုံးသပ်မှုများဖြင့် အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကောင်းမြတ်သော ကမ်းလှမ်းဖိတ်ခေါ်ချက်များကို ကောင်းမြတ်သောတုံ့ပြန်မှုများဖြင့် ပေးရန်လိုအပ်သည်ဟုရေးသားလိုက်ရပေသည်။ a:pkvGwfajrmufr_ tðyoabmaqmifa=umif; uefv$wfawmftrwf ajymqdkRFA / Edk0ifbm 18 ? ? မြန်မာ့အရေး တစိုက်စိုက်မတ်မတ် ဆောင်ရွက် မကင်း ဖြစ်မိတယ်လို့လည်း Mr McConnell က ပြောပါတယ်။လာတဲ့ အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်အမတ် Mitch McConnell က ၂၀၀၃ ခုနှစ်တုန်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကြမ်းဖက်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကနေ စစ်အစိုးရက တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့လုပ်ရပ်ကို မမေ့နိုင်ကြသလို ဒီလိုဖြစ်ရပ်မျိုး နောက်လွှတ်ပေးလိုက်တာဟာ အပြုသဘောဆောင်ပေမဲ့ ဒါဟာ သောကတွေ ထပ်မပေါ်ပေါက်ဖို့ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းက ဝိုင်းဝန်းကာကွယ်ရပတ်လည်ဝိုင်းနေတဲ့နိုင်ငံအတွက် ပထမခြေလှမ်း အစမျှသာရှိသေး မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။တယ်လို့ သတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ဒါအပြင် စစ်အစိုးရက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အရင်က နှစ်ပေါင်း ၂၁ နှစ်အတွင်း ၁၅ နှစ် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ထိန်း လွှတ်ပေးလိုက်၊ ပြီးတော့ ပုဒ်မအမျိုးမျိုးနဲ့ပြန်ထိန်းသိမ်းလိုက် အကြိမ်သိမ်းခံထားရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့က ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပေမဲ့ ဒီတခါတော့ အမြဲတမ်းလွတ်မြောက်လာတယ်ဆိုတာလွတ်မြောက်လာတာဟာ စစ်အစိုးရကျင်းပတဲ့ အတုအယောင် ရွေး နိုင်ငံတကာကမြင်ချင်ပါတယ်လို့ သူက သူရဲ့ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြကောက် ပွဲအပြီး မကြာခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ မြန်မာ့ဒီ ထားပါတယ်။မိုကရေစီရေး ထောက်ခံအားပေးနေသူတွေအားလုံး ဒီ သတင်းကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်လာသလိုပဲ ကျန်နေတဲ့ဝမ်းသာပျော်ရွှင်နေကြပေမဲ့ သတိထား စိုးရိမ်စရာ တွေရှိနေပါတယ်လို့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားနှစ်ထောင်ကျော်ကို ချွင်းချက်မရှိ လွှတ်ပေးမှပြောသွားပါတယ်။ သာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးနဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေ သူ့အနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လုံခြုံရေးကို အထူးစိုးရိမ် စီစနစ် တည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ Mitch McConnell ကပြော သွားပါတယ်။Page2Voice of Burma 789 NOVEMBER 3, 200
3. rsufESmzkH;rS သဘောမတူရင်လည်း သဘောမတူဘူးလို့ ပြောကြပါ။ နောက်ပြီးဘောလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ထပ်ပြီးတော့ ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့ သဘောလို့ တော့ ဘာဖြစ်လို့သဘောမတူတာလဲ။ ကျမလုပ်ပုံကိုင်ပုံကို သဘောပဲ ကျမမြင်စေချင်ပါတယ်။ ကျမတို့နိုင်ငံဟာ တကယ့်ပြည်ထောင်စုစစ် မတူလို့ဆိုရင် ဘာဖြစ်လို့သဘောမတူတာလဲဆိုတာကို ပြောကြပါ။စစ်ဖြစ်ဖို့ဟာ လူတိုင်းရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်။ အဲဒီမှာတော့ ကျမတော့ ကျမက အဲဒီဘာဖြစ်လို့ဆိုတဲ့ဟာ ...မေးခွန်းက အင်မတန်အရေးကြီးပြောရမှာပဲ။ ကျမတို့ ..ကျမက ဗမာဆိုတော့ ဒီလိုအခြေအနေမှာ ပြော တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ မကြိုက်ဘူးလို့ ပြောရုံနဲ့မရဘူး။ ကြိုက်တယ်လို့လို့လည်း ကောင်းပါတယ်။ လူများစုဖြစ်တဲ့ ဗမာတွေက ပိုပြီးတော့ ကြိုး ပြောရုနလည်းမရဘူး။ ကုယမာ အကြောင်းအချက်ခငခငမာ မာရှရမယ်။ဲံိ့်ှိုိုိစားရမယ်။ ဟို..ငါတို့က လူများစုဆိုတာ အခွင့်အရေးယူဖို့ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီတော့မှလည်း တဘက်ကနားလည်နိုင်မယ်။ ဘယ်လိုပြုပြင်ရမလဲ၊ပိုပြီးတော့ တာဝန်ယူဖို့။ အဲဒီလိုပဲမြင်ပါ။ ကိုယ့်မှာ အင်အား ပိုပြီးတော့ ဘာဖြစ်လို့ ပြုပြင်သင့်သလဲဆိုတာကို သဘောပေါက်မယ်။ အဲဒီတော့များလို့ရှိရင် တာဝန်ပိုပြီးတော့ယူရမယ်။ အခွင့်အရေးကို လျှော့ပြီးတော့ ဒီတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ ၀ါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီးများယူရမယ်။ ဒါမှ လူ့သိက္ခာနဲ့ ညီညွတ်တယ်။ ဒါမှ ကျမ တို့နိုင်ငံအတွက် ဖြစ်ကြတဲ့လူကြီးများ၊ ကျမတို့ရဲ့အသက်အရွယ် ကျမနဲ့ တမျိုးဆက်ကောင်းတဲ့အစဉ်အလာတွေ ဖြစ်နိုင်မှာပါ။ တည်း ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ နောက်ပြီးတော့ ကျမတို့ထက်ငယ်တဲ့ ၈၈မျိုး အဲဒီတော့ တိုတိုပဲပြောပါရစေ။ ကျမတို့ တော်လှန်ရေးဆိုတဲ့ ဆက်လို့ပဲဆိုပါတော့ လူလတ်ပိုင်း၊ နောက်ပြီးတော့ တက်သစ်စဖြစ်တော်လှန်ရေးသမားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို ကျမခေါ်ဆိုတဲ့အခါမှာ တခါ တဲ့ လူငယ်ပိုင်းတွေဟာ အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ ကူညီကြပါ။အားလုံး ၀ိုင်းလည်းပြောဖူးပါတယ်။ ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ်ရဲ့ ‘သူ့မှာတမ်း’ဆိုတဲ့ကဗျာ ပြီးတော့လုပ်ကြပါ။ အားလုံးရဲ့တာဝန်ဟာ တယောက်ချင်းတယောက်ပေါ်ကို အခြေခံပြီးကျမပြောလေ့ရှိပါတယ်။ တော်လှန်ရေးသမား ချင်းရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို ထားစေချင်တယ်။ ကျမရဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုတာ နောက်ဆုံးတိုင် ..နောက်ဆုံး ဆုံးတိုင်…အဲဒီ တို့မှာ အားနည်းချက်တွေရှိလို့ရှိရင် အားနည်းချက်ဟာလည်း လူတိုင်းကဗျာကို မှတ်မိတဲ့ ဖတ်ဖူးတဲ့သူတွေ မှတ်မိတဲ့သူတွေဆို သိပါလိမ့် မယ်။ နဲ့ဆိုင်တယ်။ အောင်မြင်မှုဟာလည်း လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဒီတော်လှန်ရေးသမားလေးဟာ တော်လှန်ရေးမပြီးခင်ကျဆုံးသွားတဲ့ ကိုထားချင်ပါတယ်။ တချို့ကျတော့ အားနည်းချက်ဆိုရင်တော့ ငါနဲ့ မအခါကျတော့ သူက တောင်းပန်သွားတယ်။ အားနာပါတယ်ပေါ့နော်။ ဆိုင်ဘူး။နောက်ဆုံးအချိန်ထိ မနေခဲ့တာပေါ့နော်။ အဲဒီလိုပဲဖြစ်ရမယ်။ကိုယ်က အောင်မြင်မှုဆိုတော့ ဒို့ပဲ..ဒို့ပဲဆိုတဲာဒါကြီးကတော့မဖြစ်ဘယ်လောက်လုပ်ပေးပါတယ်ဆိုတာကိုပြောမယ့်အစား ကိုယ်ဒါ့ထက် ဘူးနော်။ အဲဒီစိတ်ဓာတ်ကိုတော့ ကျမတို့ဖယ်ရှားရမယ်။ ဒါဟာပုဂ္ဂိုလ်ပို ပြီးတော့ မလုပ်ပေးနိုင်တာကို မကျေနပ်နိုင်ပါဘူး။ မလုပ်ပေးနိုင်လို့ တဦးတယောက်ချင်းဟာလည်း ဒီလိုစိတ်ဓာတ်ထားရမယ်။ အဖွဲ့အတောင်းပန်ပါတယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ် ကျမတို့အားလုံး မှာရှိရမယ်။ အဲဒီ စည်းတခုချင်းကလည်း အဲလိုစိတ်ဓာတ်ထားရမယ်။ အဲတော့ ကျမတို့လိုစိတ်ဓာတ်နဲ့လုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်… တကယ်တော့ နိုင်ငံတနိုင်ငံ လုပ်တာအောင်မြင်ရင် ဒို့ အန်အယ်လ်ဒီကွလို့ အဲလိုပြော တာဟာရဲ့တော်လှန်ရေးဆိုတာ...အခုဆိုရင် ကမ္ဘာကြီးမှာ သူတို့က အခုနောက် အင်မတန်မှမှားတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့ကျတော့လည်း ကျမတို့ ဒီဆုံးတော်လှန်ရေးကို IT တော်လှန်ရေးပေါ့နော်။ ဒီလို သူတို့ ခေါ်ကြ နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ လုပ်တာတွေဟာ သိပ်အားမရဘူးဆိုရင် အဲဒါတယ်။ နည်းပညာတော်လှန်ရေးပေါ့နော်။ အရင်တုန်းက စက်မှုတော် အန်အယ်လ်ဒီပဲဆိုပြီးတော့ လက်ညိုးထိုးတာလည်းရှိတယ်။ အဲဒီလှန်ရေးလည်းရှိခဲ့တယ်။ တကယ့် ပြင်သစ်တော်လှန်ရေး…တော် နှစ်ခုစလုံးက မမှန်ဘူး။ မမှန်ဘူး။ အားလုံးတကယ်ပဲ ကျမတို့ဒီတိုင်းလှန်ရေးဆိုတာ အမျိုးမျိုးပေါ့။ တော်လှန်ရေးဆိုတာဟာ အပြောင်း ပြည်မှာ စစ်မှန်တဲ့ စိတ်ဓာတ်တော်လှန်ရေးကြီးကို အောင်အောင်မြင်အလဲကြီးတခုပဲ။ သိသာတဲ့ အပြောင်းအလဲကြီးတခုပဲ။ မြင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် အားနည်းချက်တွေကိုလည်း အားလုံးနဲ့ဆိုင် အဲဒီလိုအပြောင်းအလဲတွေဟာ ကျမတို့ ကမ္ဘာကြီးတည်သရွေ့ တယ် ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်ထားရမယ်။ဒီလို အပြောင်းအလဲတွေက ရှိနေမှာပဲ။ အဲဒီတော့ ကျမတို့ အားကိုးမှာ အောင်မြင်ချက်တွေကိုလည်း အားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့ စိတ်တော်လှန်ရေးစိတ်ဓာတ်မွေးတယ်ဆိုတာ အဲဒါကို ပြောတာ။ ခေတ်နဲ့ ဓာတ်ကို ထားရမယ်။ ဒါဟာ တကယ့်ကို ညီညွတ်ရေးရဲ့အခြေခံပါပဲ။အညီ ကုယရဲ့တာဝန်ကို ဆုးခန်းတုငအောင် ဆက်ပြီးတော့ ထမ်း ဆောင်ိ့်ိံ်ဒီတော့ ကျမတို့ ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ကို ထူထောင်နိုင်ရင် ကျမတို့တိုင်းရင်းသွားချင်တဲ့ စိတ်။ အဲဒီတော့ အခု ကျမတို့ဟာ ခေတ်နဲ့အညီဒီပြည် သားအားလုံး ... ကျမ တိုင်းရင်းသားထဲမှာ ဗမာကိုပါ ထည့်ပြီးတော့ထောင်စုစိတ်ဓာတ်တွေကို ဘယ်တော့မဆို ခိုင်မြဲသထက်ပိုပြီးတော့ ပြောလိုက်မယ်။ ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆိုတာ ဒါပြောစရာမလိုဘူး။ ကျမခိုင်မြဲအောင်လုပ်သွားရမှာက အဆုံးရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ ဘယ်တော့မှ တို့လည်း တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပဲ။ ဒီထဲက တိုင်းရင်းသားတစုပဲ။အဆုံးရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒီ...ပင် လုံညီလာခံ..ဒုတိယပင်လုံညီလာခံ အဲဒီတော့ ကျမတို့တိုင်းရင်းသားအားလုံးရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ခေါ်ပြီးလို့ရှိရင် ပြီးပြီဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ ပင်လုံညီလာခံက ဆုံး ကြောင့် အောင်မြင်တယ်ဆိုတာကိုပဲ ကျမတို့ ရှေ့ရှုပြီးတော့ ကြိုးစားဖြတ်ချက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ရ မယ်။ ဆက်ပြီး ဆက်ပြီးတော့ သွားပါ့မယ်လို့ … ကျမ … ကတိပြု တယ်ပဲပြောပါရစေ။ ကျမ … ကျမဒီပင်လုံစိတ်ဓာတ်တွေကို ပိုပြီးတော့ ခိုင်မာအောင်လို့ ပိုပြီးတော့ ကျယ် ကတိ သိပ်ပြီးတော့ လည်း မပေးချင်ဘူး။ ကတိဆိုတာ သေချာတည်နိုင်ပြန့်အောင်လို့ ကျမတို့ ဆက်ပြီးတော့ ကြိုးစားသွားရမယ်။ တယ်ဆိုတဲ့ဟာကို အာမခံချက်ရှိမှ။ အဲဒီတော့ ကျမ လုပ်နိုင်သလော အဲဒီတော့ ကျမဒီမှာ ခပ်တိုတိုနဲ့ပဲပြောပါရစေ။ ပေးအပ်ခဲ့တဲ့ … က်လုပ်သွားပါ့မယ်။ ကျမ တတ်နိုင်သလောက် ဒီတာဝန်ကို ကျေပွန်အခုပေးတဲ့ တာဝန်တွေကို ကျေပွန်အောင်လို့ ကျမကြိုးစားပါ့မယ်။ ဒီလို အောင်လုပ်သွားပါ့မယ်လို့ပဲ ပြောပါရစေ။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါကြိုးစားတဲ့နေရာမှာ ၀ိုင်းပြီးတော့ ကူညီပေးကြပါ။ အကြံဉာဏ်ပေးကြပါ။ တယ်၊ ÐÐÐÐÐNOVEMBER 3, 200 Voice of Burma 789 Page 3
4. vkHðcHa;aumifpDrSm jrefrmhta; wHcg;ydwfaqG;aEG;awmhrnfVOA / Ekd0ifbm 18 ? ? မြန်မာ့အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ မကြာခင် နာ ”ဒါ့အပြင် အခုအစည်းအဝေးက မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်လို့ လုံရီပိုင်းအတွင်း အမေရိကန်စံတော်ချိန် ကြာသပတေးနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းမှာ ခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတွေအကြား သဘောထားကွဲပြားမှုတွေကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာ တံခါးပိတ် ဆွေးနွေးကြဖို့ရှိတယ်လို့ ကို ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးကြဖို့သာဖြစ်ပြီး တချို့လုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ ဗြိတိန်နိုင်ငံ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးပြော နိုင်ငံတွေက မျှော်လင့်သလို ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကနေ မြန်ခွင့်ရသူက ဗွီအိုအေကို ပြောခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိ မြန်မာပြည်က ရွေး မာစစ်အစိုးရအပေါ် အရေးယူဖို့ကတော့ ဖြစ်လာနိုင်စရာ မရှိဘူးလို့ကောက်ပွဲပြဿနာ၊ တိုင်းရင်းသားအရေးပြဿနာတွေကိုထည့်သွင်း လည်း ဒေါက်တာသောင်းထွန်းက အခုလို ဆက် ပြောခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးဖို့ရှိပြီး ကုလသမဂ္ဂရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးသံကိုယ်စား “အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကတော့ လတ်တလောမှာ ကျနော်တို့လှယ်ကနေ လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ အစီရင်ခံစာတင်သွင်းမှာ ဖြစ်ပါ ဖြစ်လာဖို့မရှိဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ခုနကိစ္စတွေအပေါ်မှာ တရုတ်တယ်။ အပြည့်အစုံကိုတော့ မနန္ဒာချမ်းက ပြောပြပါမယ်။ နိုင်ငံက ဒါ ပြည်တွင်းရေးလို့ မြင်တယ်။ ရုရှားက ပြည်တွင်းရေးလို့ မြင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ နယူးယောက်ခ်မြို့မှာ နိုဝင်ဘာလ တယ်။ တခြားနိုင်ငံတွေကတော့ ဒါတွေက ကုလသမဂ္ဂကနေ အရေး၁၈ ရက် ကြာသပတေးနေ့ အမေရိကန်စံတော်ချိန် မွန်းလွဲပိုင်းကျရင် ယူဆောင်ရွက်သင့်တယ်လို့ မြင်တယ်။ အဲ့တော့ ဆွေးနွေးမှုတွေတော့ဆွေးနွေးမယ့် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ တံခါးပိတ် စည်းအဝေး ရှိနေတယ်။ ဆွေးနွေးမှုတွေဟာ သဘောထားမတူညီမှုတွေကို ကျဉ်းမှာကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာဘန်ကီမွန်းရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ မြောင်းသွားအောင်လုပ်တဲ့သဘောရယ်၊ ဒီဗမာနိုင်ငံရေးကိစ္စအပေါ်မှာဆိုင်ရာ အထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် ဗွီဂျေနမ်ဘီယာ (Vijay K. Nambiar) ကုလသမဂ္ဂက အဆက်မပြတ် အာရုံစိုက်မှုရှိနေတယ်ဆိုတာတွေကိုက မြန်မာပြည်မှာ လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ပြဿနာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ လက်ရှိ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကို ပြသလိုတဲ့ အနေအထားတွေအစီရင်ခံစာ တင်သွင်းမှာဖြစ်တယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ ဗြိတိန်နိုင်ငံ လည်းဖြစ်တယ်။ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံး ပြောခွင့်ရသူ ဟားရိယတ်ခရော့စ် လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို လုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေက(Harriett Cross) က ဗွီအိုအေကို အခုလို ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်လို ကူညီဆောင်ရွက်မလဲ။ ဘယ်လို ဘုံ ချဉ်းကပ်မှု မျိုးတွေရမ “လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ မြန်မာ့အရေး တံခါးပိတ် ဆွေးနွေးမှာဖြစ် လဲဆိုတဲ့ ကြိုးပမ်းရှာဖွေမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်”ပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂအထူးအကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ် မစ္စတာနမ်ဘီယားက ဒီအစည်းအဝေး မတိုင်ခင်တုန်းကလည်း ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးလုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေကို မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေနဲ့ပတ်သက် ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားမှာ မြန်မာပြည်ကိစ္စကို အလွတ်သဘောလို့ အစီရင်ခံဖို့ရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နောက်ဆုံး ဖြစ်ထွန်းတိုးတက် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသေးပါတယ်။ ဒီလို ဆွေးနွေးချိန်မှာ နိုဝင်ဘာလ၇မှုတွေကို အခြေခံပြီး ကျမအင်္ဂါနေ့က အီးမေးလ်ပို့ပြီးသဘော ထားတွေ ရက်နေ့က ကျင်းပပြီးစီးသွားခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ စိုးရိမ်မေးခဲ့တာကို အဖွဲ့ဝင်အားလုံးက တွေ့ဆုံဖို့ အခုလို သဘော တူခဲ့ကြတာ ကြောင်း၊ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဖြစ်ပါတယ်။” ပြန်လွှတ်ပေးတဲ့အတွက် ကြိုဆိုကြောင်းနဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအား ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရ NCGUB လုံးကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့အတွက် စစ်အစိုးရကို တောင်းဆိုဖို့ ဒါတွေကိုရဲ့ ကုလသမဂ္ဂရေးရာတာဝန်ခံ ဒေါက်တာသောင်းထွန်းကလည်း ဒီက သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။နေ့ လုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမျိုး လုံခြုံရေးကောင်စီ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံပေါင်း ၁၅ နိုင်ငံရှိပြီး ဗြိတိန်သားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို ဦးတည်သွားနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကို နိုင်ငံက လက်ရှိလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကူညီရှာဖွေနိုင်ဖို့ ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်တယ်လို့ အခုလို ပြောခဲ့ပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားမှာ မြန်မာပြည်အရေးကို မဆွေးနွေးခဲ့ကြတာ လ “အခု လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ ဘယ်လိုမျိုး မြန်မာ့နိုင်ငံရေးပြဿနာ အတန်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကူညကငတွယဖြေရှငးပေးဖိချဉ်းကပ်မတွေ၊ ဒါတွေကို ဆွေးနွေးမယ်ီို့််ှုနေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကနေ ပြန်လွတ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာ အခုလိုလုံခြုံဆိုတဲ့သဘောထားဖြစ်ပါတယ်။ နံပါတ်တစ်အနေနဲ့ ဒီတခေါက်ဆွေးနွေး ရေးကောင်စီကနေ မြန်မာ့အရေးကိုဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်၊မယ့်ကိစ္စက ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စဖြစ်တယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့နဲ့ မြန်မွာတ်မြောက်လာပြီးတဲ့နောက်ရွေးကောက်ပွဲလွန်ကာလမှာ ဒေါ်အောင် နိုင်ငံမှာ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ဖြစ်ပေါ်လာအောင် ကုလဆန်းစုကြည်နဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အပါအ၀င် တခြားရွေး သမဂ္ဂက ကြားဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ကြိုးပမ်းတဲ့အနေနဲ့ ကုလသမဂ္ဂကောက်ပွဲမှာ မပါဝင်ခဲ့တဲ့ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ၊ အစုအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူးဘန်ကီမွန်းရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအကြံပေးတွေအားလုံးပါဝင်နိုင်ပြီးတော့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ဒီနှစ်ဆန်းပိုင်းကစလို့ တာဝန်ပေးခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ အိန္ဒိယဦးတည်နိုင်တဲ့ ဘယ်လိုနိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တရပ်ကို UN ကနေကူညီ နွယ်ဖွား ၀ါရင့်သံတမန် မစ္စတာ ဗွီဂျေနမ်ဘီယာဟာ ဂျွန်လတုန်းကရှာဖွေပေးမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေ မှာပြည် မြန်မာ့အရေးဆွေးနွေးဖို့ စင်္ကာပူ၊ အိန္ဒိယနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံတွေကို သွားတွင်းစစ်အငွေ့အသက်တွေ သန်းနေတယ်။ စစ်ရေးအရတင်းမာမှု ရောက်ခဲ့ပြီး အပြန်မှာ အတွင်း ရေးမှူးချုပ်ရဲ့ မြန်မာ့မိတ်ဆွေအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်နေတယ်။ ဒီကိစ္စတွေကို ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ ဖြေရှင်းဖို့ကိစ္စမှာ နိုင်ငံတွေကို စက်တင်ဘာလမှာတုန်းက အစီရင်ခံခဲ့ဖူးပါကြောင်းသိရှိရကုလသမဂ္ဂက ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ပေးမလဲ။ ဒါတွေကို ဆွေးနွေးကြ ပါတယ်။မယ်။Page Voice of Burma 789 NOVEMBER 3, 200
5. rdrdtm;v$wfay;wJhtay: etzoabmxm;aysmhaysmif;w,fvdk@ a:pkrjrifRFA / Edk0ifbm 18 ? ?၇ နှစ်ကြာဖမ်းဆီးထားရာက ပြန်လွှတ်ပေးတာ တချိန်တည်းမှာလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ဟာ စစ်အစိုးရအနေနဲ့သဘောထားပျော့ပျောင်းလာတဲ့ လက္ခဏာပြ လာတာကို ဝမ်းမြောက်ကြိုဆိုကြောင်း ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်သတာမဟုတ်ဘူးလို့ ဒီကနေ့ နိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်း Mr. Ban Ki-Moon က ဒီကနေ့ နေ့ခင်းက တယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်စုကြည်က ပြောလိုက်ပါတယ်။ ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ ဦးအုန်းကြိုင်က ပြောပါတယ်။ ပြည်ပသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာ အခုလို ပြောကြား ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၁ နှစ်အတွင်း ၁၅ နှစ်ကျော် အကျဉ်းချခံရတဲ့ ငြိမ်းလိုက်တာဖြစ်ပြီး သူ့ကို နေအိမ်အကျယ်ချုပ်နဲ့ ထပ်မံဖမ်းဆီးချုပ်နှောင် ချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ နိုင်ငံတကာကခဲ့တာဟာ တရားဝင်မှုမရှိကြောင်း၊ အခုပြန်လွတ်လာတာဟာ လွတ် စိတ်ဝင်စားမှု အများဆုံးခံရသူတဦးဖြစ်သလို၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရက်စေ့လို့သာဖြစ်တယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောပါတယ်။ ရေစီရေးလှုပ်ရှားသူ ခေါင်းဆောင်တဦးအဖြစ်လည်း လေးစားအသိ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဒီကနေ့ NLD ရုံးချုပ်မှာ မနက် ၁၀ အမှတ်ပြုခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်။နာရီကတည်းက ညနေရုံးဆင်းချိန်အထိ နိုင်ငံတကာသတင်း မီဒီယာ ဒါ့ကြောင့် နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေက ကိုယ်စားလှယ်တွေကို လက်ခံတွေ့ဆုံနေခဲ့တယ်လို့ NLD ပါတီ သတင်းပြန်ကြားရေး တွေဟာ ဒီရက်ပိုင်းမှာ ရန်ကုန်မြို့ကို စုပြုံရောက်ရှိနေတယ်လို့ သိရပါတာဝန်ခံ ဦးအုန်းကြိုင်က ပြောပါတယ်။ တယ်။ ဒီကနေ့တနေ့တာအတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တွေ့ဆုံခဲ့ ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းက ပါတီခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူ ဦးလွင်ရဲ့ တဲ့ သတင်းမီဒီယာအဖွဲ့အစည်း စုစုပေါင်း ၁၄ ဖွဲ့ ရှိတယ်လို့ ပါ တီပြောဇနီးရက်လည်ဆွမ်းကျွေးသွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက် တနေကုန် မီဒီယာနဲ့ NLD ခွင့်ရသူတွေက ပြောပါတယ်။ရုံးမှာတွေ့ဆုံနေခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ etzaG;aumufyGJ ukv±_wfcs befuDrGef; a:pkxHzkH;quf csD;usL; VOA / Ekd0ifbm 18 ? ? မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်VOA / Ekd0ifbm 18 ? ? မြန်မာစစ်အစိုးရက ဒီလဆန်းကပဲ ကျင်းပပြီးစီး ဆန်းစုကြည်နဲ့ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်း (Mr.သွားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဟာ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတမှုမရှိသလို ပွင့် Ban Ki-moon) တို့ဟာ ဒီနေ့ ညနေပိုင်းက တယ်လီဖုန်းကတဆင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘူးလို့ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကော်မတီကရှုတ် တိုက်ရိုက် စကားပြော ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ချလိုက်ပါတယ်။ ၁၅ မိနစ်လောက် ပြောဆို ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မတီက မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဒီအဆိုပြု ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တဲ့ချက်ကိုတော့ ကြာသပတေးနေ့မှာပဲ ထောက်ခံမဲ ၉၆ မဲ၊ ကန့်ကွက်မဲ ဦးအုန်းကြိုင်က ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်းကို အခုလို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။၂၈ မဲနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်လိုက်တာပါ။ ဆုံးဖြတ်ချက်က မြန်မာနိုင် “အဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ငံမှာ ဖမ်းဆီးထားတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂,၀၀၀ ကျော်ကို ပြန် လွတ်မြောက်လာပြီးနောက် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်လွှတ်ပေးဖို့လည်း တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ မစ္စတာဘန်ကီမွန်းက နှုတ်ဆက်စကားပြောဖို့ မနေ့ကတည်းက စတင် ကြာသပတေးနေ့ကပဲ မြန်မာနိုင်ငံက နောက်ဆုံးအခြေအ ပြီး သူ့ဘက်ကစီစဉ်ပါတယ်။ အကြောင်းမညီညွတ်လို့ မနေ့ကတော့နေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ တံခါးပိတ် မပြောဖြစ်ပါဘူး။ဆွေးနွေးမှုတွေ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူး ချုပ်ရဲ့ “ဒီနေ့တော့ ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ရုံးကအထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် ဘီဂျေး နမ်ဘီယာက မြန်မာနိုင်ငံကနောက် တာဝန်ခံကိုယ်တိုင်က ပူးပေါင်းစီစဉ်ကူညီပေးမှုကြောင့် မစ္စတာဘန်ဆုံးအခြေအနေတွေကို လုံခြုံရေးကောင်စီကိုတင်ပြပြီး အဖွဲ့ဝင်နိုင် ကီမွန်းက ၅ နာရီ ၄၅ မိနစ်မှာ ကျနော်တို့ အထွေထွေအတွင်းရေးငံတွေကြား ဆွေးနွေးကြတာဖြစ်ပေမဲ့ အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေ မှူးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆီကို ဖုန်းဆက်ပြောပါတယ်။ ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ တိတိကျကျ မသိရပါဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ၀မ်းမြောက်ကြောင်း စကားပြောပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ၁၅ မိနစ်ကြာပြောပါတယ်။ အသေးစိတ်ဆန်း စုကြည်ရဲ့ ရဲစွမ်းသတ္တိနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဟာ ကမ္ဘာတ၀န်းမှာရှိတဲ့ ပြောဆို ဆွေးနွေးတာတွေတော့ ကျနော်တို့ မသိပါဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းလူသန်းပေါင်းများစွာအတွက်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေဖြစ်စေတဲ့အတွက် စုကြည်က အိမ်မှာရှိတဲ့ သူ့အခန်းထဲက ဆွေးနွေးပြောဆိုတာဖြစ်ပါလေးစားကြည်ညိုကြောင်း ပြောဆိုထားတဲ့ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေး တယ်။” NLD ပါတီရဲ့ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင်တဦး ဖြစ်သူမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်း (Ban Ki-moon) က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဦးအုန်းကြိုင်ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခင်ရက်ပိုင်း အတွင်းကကြာသပတေးနေ့မှာ တယ်လီဖုန်းကတဆင့် တိုက်ရိုက်စကား ပြောဆိုခဲ့ လည်း ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေးဗစ်ကမ်မရွန်း (David Cameron) နဲ့ပါတယ်။ နွေးထွေးတဲ့ ဆွေးနွေးမှုတွေမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရင်ဆိုင်နေရ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ တယ်လီဖုန်းနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး ပြောဆိုခဲ့ကြတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေကို အာရုံစိုက်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့လည်း အတွင်းရေးမှူး သေးတာဖြစ်ပါတယ်။ချုပ်ရဲ့ရုံးက ပြောပါတယ်။NOVEMBER 3, 200 Voice of Burma 789 Page
6. a:pkowif;azmfjymrSm NLD udkzsufodrf;+yD;ygwDtjzpfazmfjyzdk@*sme,fawGudkzdtm;ay;VOA / Edk0ifbm 19 ? ? ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သတင်းတွေကို ဖော်ပြ သတင်းဂျာနယ်တွေမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ရာမှာ NLD ပါတီအစား ဖျက်သိမ်းပြီး NLD ပါတီဆိုတဲ့ စာလုံးကိုအစား သတင်းတွေကိုရေးသားရာမှာ သတင်းတိုပုံစံနဲ့သာရေးသားခွင့်ပေးပြီးထိုးသုံးဖို့အတွက် စာပေစိစစ်ရေးက ဂျာနယ်တိုင်းကိုမဖြစ်မနေထည် သတင်းဆောင်းပါးလိုအရေးအသားမျိုးတွေအားလုံးကို စာပေစိစစ်ရေးသွင်းရေးခိုင်းနေပါတယ်။ NLD ပါတီ ဆက်လက်ရပ်တည်ခွင့်နဲ့ ပတ် ကပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တရားရုံးသွားသက်လို့ တရားရုံးမှာစွဲဆိုထားတဲ့အမှု မပြီးပြတ်သေးခင် အခုလိုဖျက် တဲ့ဓါတ်ပုံကို စာပေစိစစ်ရေးတင်ရာမှာ ဓါတ်ပုံရဲ့အောက်မှာ စာတမ်းသိမ်းပြီးသောဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကို ဖော်ပြခိုင်းတာဟာ တရားရုံးကိုမထီ မတင်မိလိုက်ဘဲ ထုတ်ဝေဖြန့်ချိတဲ့အခါ မှာတော့ တရားရုံးသွားတဲ့ပုံလို့မဲ့မြင်ပြုရာကျတယ်လို့ NLD ပါတီရဲ့ရှေ့နေက ပြောပါတယ်။ စာတမ်းထိုးမိလိုက်တဲ့ ပေါ်ပြူလာဂျာနယ်ကိုလည်း မနေ့က စာပေစိစစ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်ထိန်းသိမ်းခံထားရာကနေ ရေးက ခေါ်ယူသတိပေးခဲ့ပါတယ်။လွတ်မြောက်လာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကို သတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော် ဒီလိုတင်းကျပ်တဲ့ ကန့်သတ်မှုတွေအပြင် နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက်ပြရေးသားခွင့်ပေးပေမဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေများလွန်းတယ်လို့ သတင်း အင်္ဂါနေ့ကထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ First Eleven အားကစားဂျာနယ်ကိုလည်းသမားတွေကပြောပါတယ်။ အထူးသဖြင့် NLD ပါတီအစား ဖျက်သိမ်း စာပေစိစစ်ရေးကထုတ်ဝေခွင့် ၂ ပတ် ပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်။ အကြောင်းပြီးသော NLD ပါတီ၊ ဗဟန်းမှာရှိသော ဖျက်သိမ်းပြီးသော NLD ပါတီရုံး ကတော့ ဥရောပဘောလုံးပွဲအသင်း ၃ သင်းနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုရေးချုပ်ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကို စာပေစိစစ်ရေးက မဖြစ်မနေထည့်ခိုင်း ရာမှာ အရောင်တွေခွဲထားတဲ့စားလုံးတွေကို ဖတ်ကြည့်ရင် SU Freeနေတယ်လို့ ပြည်တွင်းသတင်းထောက်တဦးက ပြောပါတယ်။ ဆိုတဲ့စာတမ်းကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ဆိုပြီး ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရတာဖြစ်တယ် “လူထစည်းဝေးပွဲကို ရွှေဂတငမာရှတဲ့ အမျိုးသားဒီမကရေစီအဖွဲုိံ့်ှို လို့ သတင်းထောက်တဦးက ပြောပါတယ်။ချုပ်မှာပြုလုပ်ပါတယ်လို့ ရေးတဲ့အခါမှာလည်း သူက ဘယ်လိုရေးခိုင်း “ဘောလုံးဂျာနယ်လေးမှာ highlight လေးတွေလုပ်ပြီးတော့သလဲဆိုတော့ ဖျက်သိမ်းပြီးသော NLD ပါတီ ပေါ့နော်၊ နောက်ပြီးတော့ အင်္ဂလိပ်စာလုံးလေးတွေဖော်ပြတဲ့နေရာမှာ ပြဿနာတက်နေတော့ဖျက်သိမ်းပြီးသော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီရုံးချုပ်ရှေ့ဆိုပြီး အဲဒီလိုမျိုး အယ်ဒီတာကို အလုပ်ထုတ်ခိုင်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ တိုက်ပိုင်ရှင်တွေကတော့ထည့်ခိုင်းတယ်ခင်ဗျ။ ဒီတပတ်ထွက်မယ့်ဂျာနယ်တွေ ရော၊ နောက်တ အလုပ်မထုတ်ဘဲနဲ့ ဂျာနယ် ၂ ပတ် ရပ်ဆိုင်းလိုက်တယ်လို့တော့ပတ်ထွက်မယ့်ဂျာနယ်တွေရောမှာ အဲဒီလိုပဲ ရေးရမယ်ပေါ့နော်။ ဒေါ်စု ကျနော်တို့ကြားရတယ်ခင်ဗျ။ ဆန်းဒါးလန်းက Sunderland လို့ပေါင်းကိုလူထုတွေက အားပေးနေတဲ့သတင်းတွေ မပါရဘူးခင်ဗျ။ သူ့ရဲ့အနီး ထားတယ်ခင်ဗျ။ အဲဒီမှာ သူက SU ကို အနီတော်တော်ရင့်ပြီး highကပ်ဆုံးပုံတပုံကိုပဲ ပေးသုံးတယ်ခင်ဗျ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လူထု light လုပ်ထားတယ်။ နောက်တခါ အဲဒီမှာ Free ဆိုတဲ့ စာလုံးတကိုဘာတွေဟောတယ်၊ ပြောတယ်ဆိုတာတွေလည်း ရေးလို့မရဘူး။” လုံးပါတယ်ခင်ဗျ။ အဲဒီကြားထဲမှာပေါ့နော်။ သူက အဲဒီ Free ကိုလည်း တကယ်တော့ NLD ပါတီဆက်လက်ရပ်တည်ခွင့်နဲ့ပတ်သက် highlight လုပ်ထားတယ်။ SU Free ပေါ့ဗျာ။ အဲဒီဟာကိုသူတို့ကလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် စွဲဆိုထားတဲ့အမှု မပြီးပြတ် ထောက်ပြီးတော့ပေါ့နော် သူတို့ဂျာနယ် ၂ ပတ်နားဆို နားပေးပါမယ်သေးဘဲ ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ လ ၁၈ ရက်နေ့ကမှ နေပြည်တော်တရားရုံး ဆိုပြီးတော့ နားမယ်လို့ ကျနော်တို့ ကြားတယ်ခင်ဗျ။”ချုပ်မှာ အမှုကိုကြားနာခဲ့တာပါ။ အခုလို အမှုမပြီးပြတ်သေးဘဲ ဖျက် သတင်းထောက်တဦးပြောပြခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့ First Elevenသိမ်းပြီးသော NLD ပါတီဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို ရေးသားခိုင်းတာဟာ ဂျာနယ်ဟာ စာပေစိစစ်ရေးကိုမူကြမ်းတင်တဲ့စာနဲ့ အချောထုတ်ဝေ ဖြန့်တရားရံးကို မထီမြဲ့ မင်ပြုရာကျတယ်လို့ NLD ပါတီရဲ့ရှေ့နေဦးဉာဏ်ဝင်ုးချိတဲ့ကြားမှာ မတူညီတာတွေပါသွားတာရှိသလို အားကစားနဲ့ မပတ်က ပြောပါတယ်။ သက်တဲ့အကြောင်းအရာတခုကိုဖော်ပြမိတဲ့အတွက် ဂျာနယ်ကို ၂ ပတ် “ဒါ ကျနော်တို့ လုံးဝလက်မခံနိုင်တဲ့ဟာပါ။ NLD ပါတီဟာအခု ထုတ်ဝေခွင့်ရပ်နားခံရတာဖြစ်တယ်လို့ Eleven Journal ရဲ့တာဝန်ထိရပ်တည်ဖို့ နည်းလမ်းတကျ ဥပဒေဘောင်အတွင်းက ကြိုးစား ခံအယ်ဒီတာတဦးဖြစ်တဲ့ ကိုဝေဖြိုးက ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။ဆောင်ရွက်နေတယ်။ ဒါကြောင့် ဖျက်သိမ်းပြီးဆိုတဲ့ဟာကို အဲန်ကယ် pmrsufESm7rSတို့ လုံးဝလက်မခံပါဘူး။ ကျနော်တို့ NLD ပါတီဟာ ရပ်တည်မှုနဲ့ပတ် စိတ်ပူလို့ မသွားပါနဲ့ ပြောတာတောင်မရဘူး။ သူတို့အနေနဲ့ အရမ်းကိုသက်ပြီးတော့ တရားတဘောင်ရှိတယ်။ တရားရုံးမှာရှိတယ်။ တရားရုံး မျှော်လင့်တယ်၊ အားကိုးတယ်ပေါ့၊ ပြီးတော့ ယုံလည်းယုံကြည်တယ်။ကမဆုံးဖြတ်ခင် အခုလိုအသုံးအနှုန်းမျိုး ဖျက်သိမ်းပြီး NLD တို့၊ ဖျက် အခု အမေ့ကို တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါကြတော့ သူတို့ အရမ်းကိုဝမ်းသာသိမ်းပြီး NLD ရုံးဟောင်းတို့ ဒီလိုသုံးတာဟာ တရားရုံးကို မထီမဲ့မြင်ပြု နေကြတယ်။ နောက်တခုက သူတို့ရောဂါ တ၀က်လောက်ကိုသက်သာရာရောက်တယ်လို့ အဲန်ကယ်လ်တို့ မြင်ပါတယ်။” တယ်လို့ သူတို့က စိတ်ထဲမှာထင်ပြီးတော့ အားလုံးက၊ အန်တီက NLD ပါတီရဲ့ရှေ့နေဦးဉာဏ်ဝင်းပြောပြခဲ့တာပါ။ ဥပဒေ ကြောင်း သူတို့ကို ကျန်းမာပါစေလို့ ပြောတာတောင်မှ မဟုတ်ဘူး၊ အန်တီ ကျန်းအရ ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ NLD ပါတီ ဆက်လက် ရပ်တည်ခွင့်အတွက် တရား မာနေဖို့ လိုပါတယ်လို့ သူတို့က ၀ိုင်းပြီးတော့ ပြောကြသေးတယ်။”ရင်ဆိုင်နေတာဖြစ်ပြီး အမှုကို တရားရုံးကပယ်ချခဲ့ရင်လည်း ရှေ့ ဆက် HIV/AIDS ဝေဒနာရှင်တွေကို အခမဲ့ ကြည့်ရှု စောင့်ရှောက်ပေးရင်ဆိုင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောပါတယ်။ နေတဲ့ မဖြူဖြူသင်း ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။Page Voice of Burma 789 NOVEMBER 3, 200
7. attkdifDtufpfa0wemSifrsm;ukd a:atmifqef;pk=unfawG@qkHtm;ay;VOA / Ekd0ifbm 17 ? ? မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်း ဘာဖြစ်လို့ ဒီလောက်အများကြီးထဲက ဒီလူနာတွေကို ရွေးပြီးတော့ ကူစုကြည်ဟာ ဒီကနေ့ နေ့လယ် ၂ နာရီမှာ ရန်ကုန်မြို့ တောင်ဒဂုံမှာရှိတဲ့ ညီရလဲဆိုတော့ သူတို့က အကူအညီ အလိုဆုံးဖြစ်နေလို့။ အဲတော့HIV/AIDS ဆေးခန်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုပြီး လူနာတွေကိုအားပေး အလို အပ်ဆုံး လူတွေကို အရင်ကူညီရမယ်။”စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အကူအညီလိုအပ်တဲ့ ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်းမှာ ဖော်ပြထားသူတွေများပေမဲ့လည်း ဒီလူနာတွေက တခြားလူတွေထက် ပိုပြီးအကူ သလိုပဲ လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင် လူတိုင်းမှာ ကိုယ့်အခွင့်အရေးဆိုတာအညီလိုအပ်တဲ့အတွက် သူမအနေနဲ့ အခုလိုသွားရောက်ကြည့်ရှု အား ရှိတယ်၊ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာမြင့်အောင် လုပ်ဆောင်ကြဖို့ပေးရတာဖြစ်ကြောင်း အကူအညီတကယ်လိုအပ်သူတွေကို ကူညီ ကြဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တိုက်တွန်း ပြောကြားပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အပြည့် “ဘာပဲဖြစ်နေ ဖြစ်နေ လူဆိုတာ လူရဲ့တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ လူဖြစ်အစုံကို စုံစမ်းထားတဲ့ ကိုဇော်ဝင်းလှိုင်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။ တယ်ဆိုတာ ဗြဟ္မာ့ပြည်က အပ်တချောင်းနဲ့ လူ့ပြည်က အပ်တချောင်း HIV/AIDS ဝေဒနာရှင်တွေအတွက် တောင်ဒဂုံ ၉ ရပ်ကွက်မှာ ထိဖို့က လွယ်သေးတယ်တဲ့၊ လူဖြစ်ဖို့က မလွယ်ဘူးဆိုတာလို။ လူဖြစ်ဖွင့်ထားတဲ့ အခမဲ့ဆေးခန်းကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သွားရောက် လာမှလူရဲ့ အခြေခံသိက္ခာဆိုတာရှိတယ်၊ တန်ဖိုးဆိုတာရှိတယ်။အဲဒီကြည့်ရှုပြီး လူနာတွေကို အားပေးစကားပြောခဲ့တာပါ။ တဘက်မှာသူမ ဟာ ကိုလည်း ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်းမှာ ရဲရဲ ကြီးပြန်လွတ်လာတုန်းက ၀မ်းသာပြီးလာပေးထားကြတဲ့ ပန်းခြင်းတွေကို အသိအမှတ် ပြုထားတယ်။ အဲဒီတော့ လုံးဝ စိတ်ဓာတ်မကျနဲ့။လူတိုင်းဒီလူနာတွေကို ပြန်ပြီး လှူချင်တဲ့ အတွက်လည်း အခုလိုလာခဲ့ တာဖြစ် လူတိုင်းဟာ ကိုယ့်တန်ဖိုးနဲ့ကိုယ်ဆိုတာကို မှတ်ထားကြပါ။ ကိုယ့် တန်တယ်လို့ ဆေးခန်းအပြင်မှာ ရောက်နေကြတဲ့ ထောင်ချီပရိသတ်ကြီးကို ဖိုးကို ကိုယ်မြှင့်တင်လို့ရတယ်။ စိတ်ဓာတ်အင်အားလည်း မြှင့်တင်လို့ရပြောကြားတဲ့ မိန့်ခွန်းထဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကထည့်သွင်းပြော တယ်။ကြားသွားတာပါ။ “ဒါက အမေက လူနာတွေကိုပဲ ပြောနေတာ မဟုတ်ဘူး၊ လူတိုင်း မိမိတို့အနေနဲ့ တတ်နိုင်ရင် အကူအညီလိုနေတဲ့ သူတွေကိုကူ လူတိုင်းကို ပြောနေတာ။ လူတိုင်း လူတိုင်းမှာ တန်ဖိုးရှိတယ်။ ဒီတန်ဖိုးကညီကြဖို့ ပရိသတ်ကြီးကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တိုက်တွန်းလိုက်ပြီး မြင့်သလား၊ နိမ့်သလားဆိုတာ ကာယကံရှင် အပေါ်မှာပဲ မူတည်တယ်။ကူညီတယ်ဆိုရင်လည်း ပြန်ရလိုတဲ့စိတ်နဲ့ မကူညီကြဖို့ပြောပါတယ်။ တခြား အခြေအနေတွေပေါ်မှာ မတည်ဘူး။ တခြားလူတွေက ဘယ် “ပြန်ရလိုတဲ့စိတ်နဲ့ မဟုတ်ဘဲ တကယ်ပဲ စိတ်ရင်းနဲ့ ပေးချင်ပါ လိုပဲ ထင်နေထင်နေ ကိုယ်က ကိုယ့်ကိုယ်ကို လေးစားနိုင်ရင်၊ ငါဟာတယ်။ ကိုယ့်လောက် အဆင်မပြေတဲ့လူတွေကို သနားလည်း သနား သိက္ခာရှိရှိနဲ့နေတဲ့လူသားတယောက် ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ အသိရှိနိုင်လို့တယ်၊ ကရုဏာလည်း ထားတယ်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ပေးလို့ရပါတယ်။ ရှိရင်ဘယ်သူကမှ ကိုယ့်တန်ဖိုးကျအောင် လုပ်လို့မရပါဘူး။ ဒါကြောင့်အဲဒီလိုပေးလို့ရှိရင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘာမှ ပြန်မရရင်တောင်မှ ကျေနပ်မှု စိတ်ဓာတ်အင်အားတွေကို မွေးပါ၊ နောက်ပြီးတော့ အမေတို့ရဲ့ လုပ်အနေနဲ့ အများကြီး ပြန်ရမှာပါ။ ကိုယ့်စိတ်ကလေ အများကြီးကျေနပ်ရ ငန်းတွေကို ကူညီကြပါ၊ အဲဒီ အင်အားတွေနဲ့နော်။မယ်။ အဲဒါကြောင့် တယောက်နဲ့ တယောက် ကူညီရမယ်။ အမေတို့ “အားပေးတယ်ဆိုတာနော်၊ ပါးစပ်ကြီးနဲ့ပဲ မရဘူး။ အဲဒီ ပါးစပ်လည်း အကူအညီ လိုတယ်နော်။ အမေ့ကို အားကိုးနေတာကိုဂုဏ်ယူ နဲ့အားပေးနေတဲ့ သူတွေက အကျိုးဟဲ့ အကြောင်းဟဲ့ဆိုဘယ်ရောက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အမေကလည်း ပြန်ပြီး အားကိုးပိုင်ခွင့် ရှိရမယ်လေ၊ သွားမှန်း မသိဘူး။ အားကိုးပါတယ်။ အမေတို့ကလည်း တတ်နိုင်သမျှမဟုတ်ဘူးလား။ ပြီးတော့ ကိုယ့်လောက် အဆင်မပြေတဲ့ သူတွေကို လုပ်ပေးပါ့မယ်။ ယုံကြည်ပါ။ ကိုယ်လုပ်နိုင်တာတွေကိုတော့ ဟိုဟာလုပ်တတ်နိုင်သလောက် ကိုယ်က ကူညီချင်တဲ့ စိတ်လေးတွေ မွေးစေချင် ပေးမယ်၊ ဒီဟာလုပ်ပေးမယ်လို့တော့ မပြောနိုင်ဘူး။ တတ်နိုင်သမျှတယ်။” လုပ်ပေးမယ်။ စွမ်းအင်ရှိသမျှလုပ်ပေးမယ်။ ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ အမေ မိမိတို့လိုချင်တဲ့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို ရောက်ဖို့အတွက်စွမ်း တို့ရဲ့ အလုပ်တွေကို ၀န်းရံပေးပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်။ အားဆောင်နေကြတဲ့နေရာမှာ စိတ်ဓာတ်အင်အား၊ ဓနအင်အား၊ ငွေအင် လုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။”အား၊ လူအင်အားစတဲ့ အဖက်ဖက်က လိုအပ်မှုတွေရှိတဲ့အကြောင်း HIV/AIDS အခမဲ့ ဆေးခန်းရှေ့ရောက်လာကြတဲ့ ထောက်ခံလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်။ အားပေးသူတွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါ “စိတ်ဓာတ်အင်အားချည်းနဲ့လည်း မလုံလောက်သေးဘူး၊ ဓန တယ်။ ဒီဆေးခန်းက လူနာတွေ အခုလို နေစရာအိမ်ရှိအောင်၊ လူနာအင်အားတွေလည်းလိုသေးတယ်၊ ဉာဏ်အင်အားလည်းလိုတယ်၊ ငွေ တွေ ဆေးဝါးကုသမှုပုံမှန်ရရှိအောင် ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်ပေးနေတဲ့အင်အားလည်း လိုတယ်။ အဲဒီတော့ လိုရင်လိုသလို အမေတို့ကနေပြီး မဖြူဖြူသင်းကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အခုလို လာတွေ့တဲ့တော့ တောင်းမှာပဲ။ အဲတော့ ပေးနိုင်သမျှ ပံ့ပိုးပေးကြပါ။အမေတို့ဘက် အတွက် လူနာတွေက ၀မ်းသာအားရ ဖြစ်နေကြတဲ့အကြောင်း အခုလိုကလည်း တတ်နိုင်သမျှပံ့ပိုးပေးပါ့မယ်။ အခုဆိုရင်ဒီရပ်ကွက်မှာ အကူ ပြောပြပါတယ်။အညီလိုအပ်တဲ့သူတွေ အများကြီးရှိမှာပေါ့။ အခြေအနေသိပ်မကောင်း “၀မ်းသာတာပေါ့၊ ၀မ်းသာတယ်ဆိုတာကဘာကြောင့်လဲဆိုတာရှိတာပေါ့။ သိပ်ပြီးတော့ အဆင်မပြေတာတွေရှိတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ တော့ လမ်းတောင် မလျှောက်နိုင်တဲ့ လူနာတယောက်ရှိတယ်။ ကျမက pmrsufESm6okd hNOVEMBER 3, 200 Voice of Burma 789 Page 7
Dog Bitten in Burma